Baadi goob baahi badan! Q-14ADD W/Q: Maxamed Muuse Sh. Nuur | Laashin iyo Hal-abuur
Baadi goob baahi badan! Q-14AAD
Waxaa la soo gaaray waqtigii uu dhici lahaa arooska C / rashiid iyo Ilhaan, Xaflad weyn ayaa la abaabulay, dad maamuus iyo magacba leh waa la wada casuumay, wax walba sida loogu tala galay ayey ugu soc gooni ah oo uu ku hayay C / rashiis cadeyn usoo helay. Caddayntii uu C / rashiid ugu qubayn lahaa ugana dhaadhicin aabihii i C / rashiid uu maleegayo shirqool ka dhan ah qoyska ayuu helay, wuxuu la wadagaay Khadra oo iyana ogaatay in c / rashiid uu ahaa kan labadood iyo shirqoolada ah i uusan ku haboonayn la wareegidda booska aabihii Xaashi, dhamaan intaa iyo in ka badan caddayntooda ayaa la helay. Daahir isla markiiba nuqul ka mid ah ayuu u diray C / rashiid isaga oo tusayay in markan qoyaanka lagu hayo, qofka ugu horeeyo ee hadduu ogaado arrintana ka takhalusayo uu noqon doono Xaashi.
Waxay ahayd in uu noqdo aroos farxadeed, C / rashiid riya u rumowday ayey u ahayd, wuxuu is lahaa waad dhalisay goolashii aad ku gaari lahayd hanashada boqortooyada xaashi mid ka mid ah, laakin caddaymahan uu laja C/rashiid wuxuu u tagay daahir, wuxuuna waydiiyay in uu qof kale la wadaagay iyo in kale daahir ayaasa u sheegay in uusan wali qof la wadaagin isaga naftiisana uu doonayo dagaalkan in uu kali ku ahaado si uu u muujiyo in ah gacantiisa ku qaatay. Aroos lagu wada faraxsan yahay ayuu ahaa oo dhamaan laga soo wada qayb galay, laakin olol ayaa dhan walba ka shidmay uusan, C / rashiid ku farxin. Mahad isagana wuxuu jeclaa ilhaan farxad uma ahayn Guurka, kaaga daranee wuu ogaa i C / rashiid uu Ujeedo ka lahaa arooska ilhaan.
Dhinaca kale Yaasin dhankiisa wuxuu ogaa i dhamaan xaashi iyo guuraba ay wada ogaarsanayeen, laakin wuxuu isbahaysi qarsoon la yeeshay Mahad, Nasro iyo Muuse oo ajanda qarsoon ay kula wareegayaan boqortooyada reer xaashi. Waxay isla garteen in jaaniskan uu yahay jaaniska ugu fiican ee ay reer xaashi uga wada takhalusi karaa maadaama hal meel lagu wada kulmiyay oo qof ka maqan aysan jirin. Yaasin wuxuu soo abaabulay Qarax lagu soo hoos qariyay gaari ka mid ah gawaarida Xafladda u adeegaysay isaga oo waliba isticmaalay rag ka mid ah kuwa xafladda cuntadeeda diyaarinayay. Qorshaha si wanaagsan ayuu u socday ilaa uu Haajir uu ka shakiyay mid ka mid kuwa qaraxaas loo xil saaray, taasna ay sababtay in kooxdaas qaraxa abaabushay mid ka mid ah uu shakiyay isna dhahay nolosha aaaaaaab badan dhaawacya kalana ay ugu geysteen in badan oo martidii arooska ahayd.
Waxyeelo badan ayaa meesha ka dhacday, halkaas waxaa dadkii ku dhintay ka mid ahaa khadra, daahir oo khadra maydkeeda ku dul barooranayana dhaawac iyo Naxdin ayaa halkaas ka soo gaartay. C/rashiid oo goobta vax ku noqon wuxuu daba socday oo u muuqday Daahir, jaanis ayeyna u ahayd daahir oo dhaawacan markuu arkay, isaga ayaa goobta ka qaaday oo isbitaalka ula cararay ujeedadiisana waxay ahayd in uu laa Musiibo ayey ahayd, arooos farxadeed ayaa isku baddalay Geeri iyo naxdin dadka qaar uur ku taalo ku reebay.
Xaashi iyo haajir dagaal ayey qaadeen ayaga oo isku leexsaday ciidankooda, wuxuu ahaa dagaal lagu doonayay in looga takhaluso Yaasin, nasiib wanaag way ku guuleysteen wayna soo qabteen ayaga oo kaalma ka helayay Guurein noaa reer muuse. Waxay si hoose ula wareegeen ciidankii guure, maxaa yeelay waxay ogaayeen in guure uu damaciisa la mid ahaa kooda oo kale, ujeedada ay wada lahaayeena waxay ahayd in ay la wareegaan shaqada Xaashi, sidaa darteed isma aan. Waxay u jaleecaan Yaasiin mooryaan oo damiciisa ahaa, xaan cunaa, maxaasa noqon karaa, taasna waxay u arkayeen in yaasiin ahaa nin damiciisa uusan u fogayn sida guure oo grönkål, sidaa darteed, waxay si hoose ula guare oohan.
Xaashi iyo Haajir markii ay yaasiin qabteen maadama uu jiray heshiis hoose oo guure kala dhaxeeyay waxay ku wareejiyeen yaasiin si uu uga aar guto dilka uu hooyadiis kula kacay guurana yaasin xabsi ayuu ku xirtay. Yaasiin dhibaato oo kaliya kuma ahayn qoyska reer xaashi iyo guure sidoo kale wuxuu dhibaato ku ahaa taliye daacad oo uu caddaymo ku hayay. Cadowga yaasin wada ugaarsanayay maadaama ay badnaayeen hadana i yaasiin badbaado waxay anfac u ahayd reer muuse ​​oo u arkayay jaranjarada ay ku gaari karayeen hadafkooda. Maadaama si hoose loola wareegay ciidanka guure waxaa la sii daayay yaasin, balse yaasin naftiisa ma uusan ogayn in si hoose loo yeeshay, waxaa loo muujiyay jaanis uu ku baxsan karo.
Guure baxsashada yaasin kuma farxin, wuxuuna taliye daacad ku wargaliyay in yaasin uusan hoos tagin taliskiisa wixii hadda ka dambeeyana uu naftiisana uu uga baqayo. War fiican uma ahayn taliye daacad, maxaa yeelay labada nin uu iska ilaalinayay ee dhibaatada ku noqon karta ayaa hadda är ugaarsi ka dhaxeeyaa, sidoo kale waxaa meesha ka sii baxayay oo sii daciifayay ugaarsiga uu tayaaaaaaaaaaaa caddayn ugu helo waa ka xirmeysay. Yaasin oo lagu ibtileeyay Maryan dhibaateenteeda ayaa hadana weerar ku qaaday guriga maryan, laakin taliya daacad oo isaga maryan si gooni u gaarsanayay kadib markii uu ogaaday in aabaheed uu lacag ugu wareejiayay koontadeayo, isaga oo lacagtaas faraha badan kusoo gashay taas baddalkeeda uu ka doonayay in ay usoo basaasto boqortooyada aabaheed maadaama uu dareensanaa in maryan aysan la dhacsanayn qaabka nolosha aabaheed.
Waxaa goobta si lama filaan ah ugu kulmay yaasiin iyo taliye daacad dagaal iyo är rasaasayn kadib taliye daacad wuxuu gacanta ku dhigay Yaasiin, laakin ma doonayn uu booliska u gacan galsho, wuxuu ogaay guaay guaay guaay guaay, waxaa halkaas ku dhamaaday walwalkii taliye daacad uu ku qabay Yaasiin iyo guure, taliye daacad wuxuu uga baddashay guure caddayntii laga hayay. Guure oo markan usoo diyaar garoobay ka takhulisidda yaasin ayaa nasiib darro waxaa är baddaly ciidankiisa oo horey u laalushnaa waxaana soo muuqday Nasro iyo Mahad oo u muujiyay in guure uusan macna u sii lahaan karin in uu la sii joogo. Waxay xarigga ka fureen Yaasiin, ciidankii oo dhanna waxaa lagu sii jeediyay in ay ka takhalusaan taliyahooda Guure. Yaasiin oo qoslaya yaabana ayaa yiri lacagta waa furaha wax walba, waa taas anigana Qabriga iga soo celisay kii qabriga ii diri lahaana isaga u dirtay, lacagta heliddeeda waa waxa aan u noolahay ee maxaan idiin qabtaa?.
La soco Q-15aad, haddii Eebbe idmo!